Ukuze ufumane ilungelo lobunikazi okanye uphawu lokuthengisa okanye ukubhalisa i-copyright eMerika, abaqambi, abadali kunye nabaculi kufuneka bafake isicelo kwi-Patent yase-United States kunye ne-Ofisi yeMpawu yoTywala (USPTO) e-Alexandria, eVirginia; ngokubanzi, amalungelo omenzi afanelekileyo kweli lizwe apho anikezelwa khona.
Ukususela ekubeni ilungelo lobunikazi bokuqala lase-US linikezwe ngo-1790 ukuya kuSamuel Hopkins wasePhiladelphia ngenxa yokusebenzisa " umlotha wepumbi kunye neeperele" -ukucoca iifom esetyenziswa kwi-soapmaking-ngaphezu kwezigidi ezisibhozo zemvume ezibhaliswe kwi-USPTO.
I-patent inikeza umenzi-lungelo ukuba angabandakanyi bonke abanye ekubeni benze, basebenzise, ​​bathengise, bathengise, okanye bathengise ukuthengisa ukuveliswa kweminyaka engama-20 ngaphandle kwemvume yomqambi-nangona kunjalo, akuvumelekanga ukuba athengise imveliso okanye inkqubo, Ikhusela nje le mveliso ekubanjweni. Oku kunika umenzi ithuba lokuvelisa nokuthengisa iimveliso ngokwakhe, okanye ilayisenisi abanye ukuba benze njalo, nokuba benze inzuzo.
Nangona kunjalo, i-patent ayiqinisekisi ngempumelelo imali. Umvelisi uhlawulwa ngokuthengisa okanye ukuthengisa ilayisenisi okanye ukuthengisa (ukunikezela) ilungelo lomenzi wabelungelo lomntu. Azikho zonke izixhobo eziyimpumelelo eyenziwa ngezoshishino, kwaye ngokwenene, ukuveliswa okunokubangela ukuba uhlawule umenzi wemali ngaphezu kokuba wenzayo ngaphandle kokuba kwenziwe isicwangciso esomeleleyo seshishini kunye nokuthengisa.
Esinye sezidingo ezidlula ngokungaqhelekanga ukuhambisa i-patent ephumelelayo yindleko ehambelana nayo, enokuthi iphakame kakhulu kubantu abathile.
Nangona iifom ze sicelo se-patent, ukukhutshwa kunye nokugcinwa kwancitshiswa ngama-50 ekhulwini xa umfaki-sicelo unobucinci obancinci okanye umvelisi ngamnye, unokulindela ukuhlawula i-Patent yase-US kunye ne-Ofisi yeMpawu yokuThengisa ubuncinane ubuncinane malunga ne-$ 4,000 ngaphezu kobomi benzi-patent.
I-patent inokufunyanwa kuyo nayiphi na into entsha, eyiluncedo, engabonakaliyo, nangona ingaqhelekanga ukuba ayifumaneke kwimithetho yemvelo, iziganeko zomzimba, kunye neengcamango ezingabonakaliyo; isitsha samaminerali okanye isityalo esitsha esasendle; izixhobo ezisetyenziswayo kuphela ekusebenziseni izinto ezikhethekileyo zenyukliya okanye amandla e-athomu kwizixhobo; umatshini ongenakuncedo; umshicileli; okanye abantu.
Kukho iimfuno ezizodwa kuzo zonke izicelo ze-patent. Isicelo kufuneka sibandakanye inkcazelo, kuquka inkcazo kunye nebango (s); isifungo okanye isimemezelo sokuchonga umenzi wesicelo (s) okholelwa ukuba ngumvelisi (original); umzobo xa kuyimfuneko; kunye nentlawulo yokufakela. Ngaphambi kwe-1870, imodeli yokuveliswa kwakudingeka kwakhona, kodwa namhlanje, imodeli ayisoze yafuneka.
Ukubiza umgaqo-esinye isidingo sokuhambisa i-patent-ngokuqinisekileyo kubandakanye ukuphuhlisa amagama amabini: igama eliqhelekileyo kunye negama legama okanye uphawu lokuthengisa. Ngokomzekelo, i-Pepsi® kunye neCoke® ngamagama ophawu; i-cola okanye i-soda yigama lohlobo okanye umkhiqizo. I-Big Mac® kunye ne-Whopper® ngamagama e-brand; i hamburger yigama lohlobo okanye umkhiqizo. I-Nike® kunye neReebok® ngamagama e-brand; Umculi okanye umkhonto wezemidlalo ungumthombo oqhelekileyo okanye amagama emveliso.
Ixesha lenye enye into eyenziwa kwizicelo zobunikazi. Ngokubanzi, kuthatha abasebenzi abangama-6 500 be-USPTO ngaphezulu kweenyanga ezingama-22 ukucwangcisa nokuvuma imvume yesicelo sephepha-patent, kwaye ngoku aphindaphindiweyo ixesha elide linokuba lide kuba iiprojekti ezininzi zokuqala zamalungelo abenzi abenziweyo kwaye ziyimfuneko yokubuyiselwa kwakhona kunye nezilungiso.
Akukho mingcipheko yobudala ekusebenziseni i-patent, kodwa kuphela umvelisi wenene unelungelo lomenzi we-patent, kwaye umntu omncinci kunikwe ilungelo lobunikazi ngumntwana oneminyaka emine ubudala evela eHouston, eTexas, ngoncedo lokubamba amaqhina.
Ukubonakalisa iNtshintsho yokuQala
Enye imfuneko yazo zonke izicelo zamalungelo abenzi-mvume kukuba imveliso okanye inkqubo yokubambisa i-patented kufanele ibe yinto ekhethekileyo kuba akukho zixhobo ezifanayo eziye zagunyazwa.
Xa i-Ofisi yePentent and Trademark ifumana izicelo ezimbini ze-patent zezinto ezifanayo, iziganeko zingena ekuqhubekeni kokuphazamiseka. IziBheno zeZibheno zePatent and Interferences ke zibeka umqokeli wokuqala onokuthi unelungelo lokufumana ilungelo lobunikazi olusekelwe kwiinkcukacha ezinikezwa ngabaqashi, nto leyo kubaluleke kakhulu ukuba abaqashi bahlale begcina iirekhodi ezilungileyo.
Abangenayo banokwenza uphando lwamalungelo abenzi abanikeziwe, iincwadi zezifundo, iifayili, kunye nezinye iimpapasho ukuqinisekisa ukuba omnye umntu akayifumanga ingcamango yabo. Banokuqesha umntu ukuba ayenzele yona okanye angenza oko ngokwabo kwiCandelo loPhando loLuntu lwe-Patent yase-US kunye ne-Ofisi yeMpawu yoRhwebo kwi-Arlington, eVirginia, kwiphepha lewebhu le-PTO kwi-intanethi, okanye kwelinye lePentent and Trademark Depository. Iilayibrari kulo lonke ilizwe.
Ngokufanayo, nge-trademarks, i-USPTO inquma ukuba kukho ukuphambana phakathi kwamanqaku amabini ngokuvavanya ukuba ngaba abathengi babeya kudibanisa impahla okanye iinkonzo zenye iqela kunye neyezinye iindawo ngenxa yokusetyenziswa kwamanqaku akhutshwa zombini amaqela.
I-Patent ilinde kunye neengozi yokungabi ne-Patent
I-Patent ilindelekileyo ibinzana elidla ngokubonakalayo kwizinto ezenziwe. Kuthetha ukuba umntu usetyenzise i-patent kwimveliso eyenziwe kwinto eyenziweyo kwaye isebenza njengesilumkiso sokuba i-patent inokukhupha eya kubandakanya loo nto kwaye abakopishayo kufuneka baqaphele kuba banokuphulaphula ukuba ngaba i-patent issues.
Xa ilungelo lobunikazi livunyiwe, umnikazi we-patent uyayeka ukusebenzisa ibinzana elithi "ilungelo lobunikazi elinde" kwaye uqale ukusebenzisa ibinzana elithi "ihlanganiswe yi-US Patent Number XXXXXXX." Ukusebenzisa i-patent ilinde ibinzana kwinto apho kungekho sicelo sophawu lobunikazi esenziwe siphumelele kwi-USPTO.
Nangona akudingeki ukuba ube nelungelo lobunikazi lokuthengisa i-United States, ubeka umngcipheko womntu oba yakho ingcinga kunye nokuzithengisa ngokwabo ukuba awufumani. Kwezinye iimeko, unokugcina ingqalelo yakho imfihlo njengenkampani yeCoca-Cola igcina iComke imfihlo, ebizwa ngokuba yimfihlo yorhwebo, kodwa ngaphandle koko, ngaphandle kwelungelo lobunikazi, ubeka umngcipheko womnye umntu ukukopisha into yakho akukho mvuzo kuwe njengomqambi.
Ukuba unelungelo lobunikazi kwaye ucinga ukuba umntu uphazamise amalungelo akho epententi, unokumangalela loo mntu okanye inkampani kwinkantolo yenkundla kwaye uhlaziywe kwiingeniso ezilahlekileyo kunye nokubango inzuzo yakho ngokuthengisa umveliso wakho weprotected okanye inkqubo.
Ukuvuselela okanye ukususwa kweePententi
Awukwazi ukuhlaziya i-patent emva kokuba iphelile. Nangona kunjalo, amalungelo angaphantsi angadluliselwa ngesenzo esikhethekileyo seCongress kwaye phantsi kweemeko ezithile, amaphepha athile okufumana iimveliso zonyango anganwezelwa ukuba enze ixesha elahlekileyo ngexesha lokuvunywa kweNkqubo yokuTya nokuPhathwa kweeMithi. Emva kokuba i-patent iphela, umvelisi ulahlekelwa amalungelo akhethekileyo.
Umqambi mhlawumbi akafuni ukulahlekelwa ngamalungelo olungelo lobunikazi kwimveliso. Nangona kunjalo, ilungelo lobunikazi linokulahleka xa lizimisele ukuba lingavumelekanga nguKomishinala weMvume kunye neeMpawu zokuthengisa. Ngokomzekelo, ngenxa yenkqubo yokuhlaziywa kwakhona okanye ukuba i-patentee ihluleka ukuhlawula iimfuno zokulondolozwa ezifunekayo i-patent isenokulahleka; inkundla inokumisela ukuba i-patent engavumelekanga.
Kwimeko nayiphi na into, umqeshwa ngamnye kwi-Ofisi ye-Patent ne-Trademark Office ufunga isifungo sokuxhasa imithetho yaseUnited States kwaye akavumelekanga ukuba afake izicelo zamalungelo olungelo lobunikazi, ngoko unokuqiniseka ukuba uthembela laba bantu ngokutsha kwakho-kungakhathaliseki indlela enkulu okanye ehamba ngayo ungacinga ukuba!
Imbali yeMpawu ze-Neon
Imbali yabashicileli bekhompyutha
I-Biography: Inventor uEmmett Chappelle
Imbali ye-Piggy Bank
Ziziphi iingoma eziphezulu ze-1983?
Uhambo lweHero - Umvuzo kunye neNdlela ebuyelayo
I-10 x 10 yokuSebenza ngokuSebenzayo isebenza njani kwaye ilungile kumdlali we-Athlete?
I-Biography ka-Queen Queenina waseSweden
I-Ather Inkcazo kwi-Alchemy neSayensi
Impressment kunye ne-Chesapeake-I-Leopard Affair
Uluhlu lweZwi lika-Halloween lweKlasi yokuNwabisa
Ukulungela igalofu: Ukuchaza indlela ehamba phambili kwiGalofu
Indlela Yokulungisa Iingxaki zezinye iifoto kwiiMoto ezimfutshane
Imfazwe yaseMexico naseMelika: iMfazwe yaseCroro Gordo
'Ixesha leNgqiqo' Isishwankathelo